Ihe kpatara I kwesiri iji kwalite Google Analytics Universal | Martech Zone
Ka anyị nweta ajụjụ a n'ụzọ ugbu a. Kwesịrị ị nweta nkwalite na Nchịkọta Universal Analytics Google? Eeh. N’ezie, o yikarịrị ka ị kwalitere na Universal Analytics. Mana, naanị maka Google megharịrị akaụntụ gị maka gị, ọ pụtaghị na ị gaghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụ na ị na-enweta ọtụtụ uru na akaụntụ ọhụrụ Universal Analytics gị.
Ugbu a, Nchịkọta Google Universal dị na nke atọ nke iwepụta ya. Ọ bụ nke beta na ọtụtụ akụkọ na-akpaghị aka na-kwalite. N'ezie, ịnweghị ike ịhọrọ ụdị ochie nke nchịkọta mgbe ị na-edozi akaụntụ ọhụrụ. Mgbe Universal Analytics malitere na beta, ọ ka na-efu ihe dị mkpa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Nke ahụ gosipụtara atụmatụ mgbasa ozi na-enye gị ohere ịmepụta ndepụta ndepụta. Ugbu a, a na-etinye atụmatụ ngosipụta zuru oke na Universal Analytics (UA), nke pụtara na ọ nweghị ihe na-egbochi akaụntụ ọhụrụ ka ọ ghara iso UA. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na naanị n'ihi na akaụntụ gị kwalitere na enweghị ihe ị ga-elezi anya mgbe ị na-akwalite.
Ihe To Ga-elezi Anya
Ugbu a, ọ bụrụ na koodu dị na saịtị gị na-eji ga.js, urchin.js, ma ọ bụ nsụgharị WAP nke koodu ahụ, ịkwesịrị imelite koodu ahụ mgbe Google ruru nke anọ nke Universal Analytics nweta nkwalite. N'ime afọ abụọ nke launching adọ anọ, ndị mbipute nke koodu ga-rụrụ arụ. Ma, ọ bụghị naanị edemede a ga-emebi. Ọ bụrụ na ị nwere mgbanwe ọdịnala ma ọ bụ mgbanwe ndị ọrụ akọwapụtara nke ị na-eji iji soro data, ị ga-atụgharị ha ka ha nwee akụkụ omenala ka nwee ike iji ha, ebe ha ga-akụda.
Nke a pụtakwara na n'ọdịnihu, ọ bụrụ na ị na-eji ụzọ ochie nke ịme nsuso ihe omume, a ga-emelitekwa ya na ụdị ọhụụ nke koodu nsuso mmemme. Yabụ, ọ bụrụ na emelitebeghị koodu gị ugbu a, gịnị kpatara ị ga - eji na - enwe nsogbu ugbu a karịa ichere afọ abụọ?
Gini mere imecha nweta nkwalite?
Ihe kpatara Google ji kwalite abụghị naanị ka ha laa gị n’iyi. Ha wepụtara ụfọdụ atụmatụ na, ọ bụrụ na i wepụta oge iji mezuo ha, ga-enyere gị aka ịtụ ihe ị na-amabughị na mbụ. Ihe ohuru a gha enyere gi aka:
Na-anakọta data site na ihe ọ bụla
Mepụta Omenala Dimensions na Custom metrics
Mepụta NJ ndị ọrụ
Ahia ahuhu Ecommerce
Google ugbu a nwere ụzọ atọ iji nakọta data: analytics.js maka weebụsaịtị, SDK mobile maka iOS na gam akporo, yana - ọ bụụrụ m ihe na-atọ ụtọ - usoro nyocha maka ngwaọrụ dijitalụ. Yabụ ugbu a ị nwere ike soro weebụsaịtị gị, ngwa gị, yana igwe kọfị gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ, n'ime nchịkọta Google. Ndị mmadụ na-etinye usoro nkwekọrịta iji rụọ ọrụ ka ha wee nwee ike ịgụta okporo ụzọ ahịa ụlọ ahịa, nyochaa okpomọkụ, na ndị ọzọ. Ohere ndi nwere enweghi ngwucha, karia n'ihi ihe ohuru ohuru.
Omenala Dimkpa na Usoro Omenala
Omenala akụkụ na omenala metrics bụ n'ezie ndị na-eto eto mbipute nke omenala ochie variables. Iji nye gị echiche nke otu ike akụkụ ọhụrụ ndị a nwere ike isi, ka anyị kwuo mgbe mmadụ debanyere aha gị maka ọrụ gị nke na-eme ka ọrụ Yelp, ị jụọ ha ọtụtụ ajụjụ. Nwere ike ịjụ ha ajụjụ nwere ụdị ọdịdị ị kpọrọ restaurantdị ụlọ oriri na ọ favoriteụ favoriteụ kachasị amasị. Azịza nye ajụjụ ndị a nwere ike ịbụ nri ndị Mexico, ụlọ ahịa sanwichi, wdg. Then nwere ike ịjụ ajụjụ na-esochi nke ugboro ole n'ọnwa ha na-eri nri. Nke a na - enye gị ọnye ọhụụ ọhụụ nke ego iri kwa ọnwa ma ọ bụ AEOM. Yabụ, ugbu a ị nwere ike ile data gị iji kesaa ndị ọrụ dị iche iche iji hụ otu ha si eji saịtị gị. Iji maa atụ, ị nwere ike ikewa ndị nwere mmasị n'ụlọ ahịa sanwichi na-eri nri ugboro 5 n'izu. Nke a nwere ike inyere gị aka ịma otu esi eme ka ọdịnaya gị na saịtị gị ka mma. Ohere di enweghi ngwụcha, ọkachasị mgbe ị na-agbakwunye nke a na ngwa mkpanaka gị. Ọ bụrụ na ị gbakwunye nsuso a na egwuregwu mkpanaka gị, ịnwere ike ịchọpụta ụzọ niile ndị ahịa na-egwu egwuregwu ahụ.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ahịa na-eji ngwa mkpanaka na ndị ahịa na-agbanwe n'etiti ekwentị, mbadamba, na ngwaọrụ ndị ọzọ, ị nweghị ike ịma n'ezie ọtụtụ ndị ọrụ pụrụ iche ma na-arụsi ọrụ ike ị nwere kwa ọnwa na ọdịnala nchịkọta. Ugbu a site na ịmepụta ID omenala nke ị kenyere ndị ọrụ gị, ịnwere ike soro onye ọrụ na-eji ekwentị ha, mbadamba, na laptọọpụ iji nweta saịtị gị dịka otu onye ọrụ. Nke a na - enye gị nghọta karịa mgbe ọ bụla etu ndị ahịa gị si eji ọrụ gị. Ọ pụtara na ndị ọrụ anaghị agụta mmadụ abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ. Ihe omuma gi di ocha.
Site na mkpesa ecommerce enwekwukwa, achọla naanị ihe ndị ọrụ zụtara na saịtị gị na ego ole etubatara. Chọpụta otu ha siri kwụsị ịzụta. Ga-enweta akụkọ dịka ndị ahịa na-agbakwunye na ụgbọ ala ha na ihe ha na-ewepụ na ụgbọ ala ha. Ọbụna ị ga - ama mgbe ha bidoro ndenye ọpụpụ na mgbe ha na - anata nkwụghachi. Ọ bụrụ na ecommerce dị mkpa na saịtị gị, lee anya n'ime nke a Ebe a ebe enwere otutu ihe ile anya.
Nke a bụ vidiyo nke otu Ahịa na-eji Google Universal Analytics:
Kedu ihe ị na-eche? Na-erite uru nke data ọhụrụ ị nwere ohere ka ị nwee ike inye ndị ahịa gị ahụmịhe ka mma karịa ngwaọrụ.
Tags: Google Analyticsgoogle Universal nyochaọnụahịanchịkọta ụwa niilemelite nchịkọta googlenweta nkwalite nchịkọta googlenweta nkwalite na nchịkọta gbasara ụwa niileKedu ihe nchịkọta ụwa niilegịnị mere ị ga-eji kwalite na nchịkọta ụwa niile
I Kwesịrị Iwube ma ọ bụ Zụta Nextzọ Mgbasa Ozi Gị Ọzọ?